China CNC machining Metal Parts factory na ndị na -eweta ya BASILE
Uru nke Ọrụ Mmepụta BMT CNC
▶ Nhọrọ dị iche iche nke ihe nrụpụta dị iji zute ihe ndị ahịa chọrọ;
Site na ntinye ọnụ ahịa dị oke ọnụ, anyị na-eguzogide Ogo ngwaahịa anyị. Anyị na -enwe ike inyocha omume, ntụkwasị obi, na iji nchekwa nke akụkụ igwe anyị yana anyị ji ezi obi na -atụ aro ndị ahịa nhazi teknụzụ kacha mma ma belata nchegbu ndị ahịa;
Feedback Nzaghachi ngwa ngwa sitere na ọrụ ndị ahịa, anyị na -anya isi na ụzọ anyị si agakwuru ndị ahịa. Maka anyị, onye ahịa bụ onye mmekọ ma anyị na-enye ha nkwado teknụzụ zuru oke, nke dị elu; Nraranye ịbụ onye gị na ya na-eme ogologo oge, ọ bụghị naanị onye na-ebubata ihe;
Ọrụ presales ọkachamara nke ajụjụ nrụpụta CNC niile na naanị mgbe ọrụ ahịa bịara n'oge;
▶ Na -enwe ọzụzụ ọkachamara na nzukọ ọmụmụ ihe oge niile na ụlọ ọrụ anyị n'efu.
Ụfọdụ Ngwaahịa Anyị Na -eme
Ọ bụrụ na ị na-achọ onye nrụpụta igwe CNC ruru eru, ndị otu anyị ga-enyocha imewe gị, kwuo ọnụego, tụọ ọnụ ahịa wee nweta akụkụ ndị na-abụghị ọla ma ọ bụ ọla ka ọ bụrụ nrụpụta nke ọma. Anyị na -azụ ahịa ka anyị bụrụ ndị mmekọ gị n'oge ọ bụla nke mmepe ngwaahịa na imepụta omenala. Naanị ị kwesịrị ịtụkwasị anyị obi! Zitere anyị ajụjụ ugbu a wee rute ọnọdụ mmeri.
Nke gara aga: Ọrụ nrụpụta CNC omenala
Osote: Ọrụ Akụkụ Ngwa CNC nke emere emere
Omenala igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ, Akụkụ Ngwa CNC, Igwe eji arụ ọrụ titanium, Akara akpaghị aka, Igbe galvanized, High-End mpempe akwụkwọ Metal Parts ngwaahia,